06/01/2012 - 07/01/2012 - THIT HTOO LWIN (Daily News) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ရန်ကုန်လေ ဆိပ်မှာ ပြည်သူ လူထု သောင်းနဲ့ ချီကြိုဆို (ဓါတ်ပုံ)
နံနက် ၁၀ နာရီ ၄၅ မိနစ်မှာ လူထုခေါင်းဆေင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လည် ရောက်ရှိ ခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လေဆိပ် မှာ ဥရောပ ခရီးစဉ်ကနေ ပြန်လာရောက်လာတဲ့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြည်သူ လူထုသောင်းနဲ့ ချီပြီလာရောက် ကြိုဆို ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား ကြိုဆိုတဲ့ မြင်ကွင်း ဓါတ်ပုံပေါင်း (၂၀) ကို စုစည်းဖော်ပြထားပါတယ်--
နံနက် ၁၀ နာရီ ၄၅ မိနစ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန် လည်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လာရောက်ကြိုဆိုသူများကို အခုလိုတွေ့မြင် ရပါတယ်။
UNHCR ဝန်ထမ်းတွေ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ပြန်လည် တာဝန် ထမ်းဆောင်
စစ်တွေမြို့ မှ မြင်ကွင်း တခုပါ
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမှာ ဇွန်လ (၂၉) ရက်နေ့က စပြီး ဒုက္ခသည် များဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ မဟာ မင်းကြီးရုံး (UNHCR) ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ တ၀က်လောက်ဟာ တာဝန်တွေ ပြန်ပြီး ထမ်းဆောင်နေပြီလို့ ဂျနီဗာမြို့ UNHCR ရုံးချုပ်က ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အေဒရီယင် အက်ဒ်ဝပ်စ် (Adrian Edwards) က မနေ့က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
အကြမ်းဘက်မှုတွေကြောင့် အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးနေကြသူ ထောင်ပေါင်းများစွာ ရှိနေတဲ့---
Photo ; ASSOCIATED PRESS
ပြည်ပခရီးစဉ်တွေ အတွင်းမှာ မြန်မာကို Burma လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ကနေပြီးတော့ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲ တာဟာ ဥပဒေနဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့ ကိစ္စ မဟုတ်ဘူးလို့ အမျိုးသားဒီမို ကရေစီအဖွဲ့ချုပ် တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ချေပလိုက်ကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကတော့ အခုလို ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲတာဟာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနဲ့ ဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအဖြစ်နဲ့သုံးစွဲဖို့ အသိပေး အကြောင်းကြား တဲ့ အကြောင်းကို ဒီကနေ့ သတင်းစာထဲမှာ ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်း အပြည့်အစုံ ကိုတော့--- သတင်းအပြည့် အစုံဖတ်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
တင်းကြပ်ပြီး မျှတတဲ့ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ဥပဒေ တရပ် လိုကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ပြောကြား
ရခိုင်ပြည်နယ်က ပဋိပက္ခတွေ ဖြေရှင်းဖို့ဆိုရင် တင်းကြပ်ပြီး မျှတမှုရှိတဲ့ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ လိုအပ်ပါ တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြောကြားလိုက် ပါတယ်။---
အာရှဘော လုံးအဖွဲ့ချုပ် (AFC)က ပထမဆုံး အကြိမ်ကျင်း ပမည့် AFC U-22 အာရှဖလား အတွက်ခြေ စစ်ပွဲစဉ် များကို အုပ်စု(၇) စုခွဲ၍ ယခုနှစ်ဇွန်လ အတွင်း ကျင်းပလျက်ရှိသည်။ ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပလျက်ရှိသည့် အုပ်စုတွင် ပွဲစဉ်သုံးပွဲ ယှဉ်ပြိုင်အပြီး တောင်ကိုရီးယားနှင့် အိမ်ရှင်မြန်မာအသင်းတို့သည် ရမှတ်(၇)မှတ်စီ တူညီနေသော်လည်း တောင်ကိုရီးယားအသင်းက (ဂိုးကွာခြားချက်)ဖြင့် အုပ်စုကို ဦးဆောင်ထားသည်။
သောက်ရေကန်အဆိပ်ခတ်မှုကြောင့် မြေပုံမြို့တွင် နှစ်ဖက် တင်းမာ
ရန်ကုန်၊ ဇွန် - ၂၉
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြေပုံမြို့ ဈေးအနီး တစ်ရာတန် သောက်ရေ ကန်တွင် အဆိပ်ခတ် မှုကြောင့် ရခိုင်တိုင်း ရင်းသားများနှင့် ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးများကြား ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းမှ စတင်၍ နှစ်ဖက် တင်းမာမှု စတင်ဖြစ်ပွား ခဲ့ကြောင်း မြေပုံမြို့ခံများက 7Day News သို့ပြောကြားသည်။
တစ်ရာတန်ကန်တွင် ငါးများ သေဆုံးနေခြင်းတွေ့ရှိရာမှ ယင်းကန်အား အဆိပ်ခတ်ခြင်းရှိ၊ မရှိ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီးနှင့် မြို့မိမြို့ဖများက နေ့လယ် ၁ နာရီ၌ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့သည်။
အဆိပ်ခတ်ထားသည်မှာ သေချာသောကြောင့် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက မြေပုံမြို့ပေါ်တွင် ယင်းကန်ရေ သောက်သုံးခြင်းမပြုကြရန် အသံချဲ့စက်များဖြင့် လိုက်လံအသိပေးခဲ့ကြောင်း မြေပုံမြို့နေ ကိုထွန်းထွန်းနိုင်ကပြောသည်။
လူနှစ်ဦး သေဆုံးခဲ့သည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း သေဆုံးမှုမရှိကြောင်း မြို့ခံအများစုကပြောသည်။
ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီခန့်က နှစ်ဖက်တင်းမာရာမှ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပွားခဲ့သော်လည်း နေ့လယ် ၃ နာရီတွင် ငြိမ်သက်သွားကြောင်း၊ မြေပုံမြို့ပေါ်တွင် တစ်ရာတန်ကန်အပြင် ကန်ဒူကြီးကန်ရှိပြီး ယင်းကန်မှာမူ အဆိပ်ခတ်ထားခြင်းမရှိကြောင်း လိုက်လံစစ်ဆေးရာတွင် လိုက်ပါခဲ့သူ ဦးဘခင်ကပြောသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အမည်ကို ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေတွင် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်း ထားသည့် အတိုင်း ရေးသား၊ ပြောဆို အသုံးပြုရေး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီသို့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် ဇွန် ၂၉ရက်က အသိပေးအကြောင်းကြားစာ ထပ်မံထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံတော်အမည်ကို ဘားမား(Burma)ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောဆို သုံးပြုနေ မှုအား မြန်မာ(Myanmar) ဟုသာ ခေါ်ဆိုရန် အသိပေးအကြောင်းကြားစာကို ဇွန် ၁ရက်နေ့က ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်သဖြင့် ယခုအခါ ဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံထုတ် ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အခန်း(၁)၊ ပုဒ်မ ၂ တွင် "နိုင်ငံတော်ကို ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဟု ခေါ်တွင်ရမည် (The state shall be known as The Republic of the Union of Myanmar) "ဟု ပြဋ္ဌာန်း ထားပါ သည်။
နိုင်ငံရေး ပါတီများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၀၅(ခ)တွင် နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ရပ်သည် ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေနှင့် တည်ဆဲ ဥပေဒများကို လေးစားလိုက်နာ ရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(NLD) ပါတီ အနေဖြင့် နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆ (ဂ) ပါ"ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို လေးစား လိုက်နာရေး" ဆိုသည့်အချက်ကို ပါတီမှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားစဉ်ကပင် ဝန်ခံချက် ပြုထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ၊ ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်) သည် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်သည့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ညီလာခံ၌ ၁-၆-၂၀၁၂ ရက်နေ့က မိန့်ခွန်း ပြောကြားရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံကို Burma ဟု သုံးနှုန်း ပြောဆိုသွားကြောင်း မီဒီယာများမှ တွေ့မြင် ကြားသိရပါသည်။
နိုင်ငံတော် အမည်ကို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေတွင် "နိုင်ငံတော်ကို ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဟု ခေါ်တွင်ရမည် (The state shall be known as The Republic of the Union of Myanmar) " ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားပြီး ဖြစ်၍ Burma ဟု သုံးနှုန်း ပြောဆိုခွင့် မရှိပါ။ နိုင်ငံတော်၏ အမည်ကို ရေးသားရာ၌ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေပါအတိုင်း "ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် (The Republic of the Union of Myanmar) " ဟု အသုံပြုကြရန်နှင့် ပြောဆိုရာတွင် မြန်မာ(Myanmar)ဟု သာ သုံးနှုန်း ပြောဆိုသွားရန် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ၁-၆-၂၀၁၂ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၄/နငရ-မပတ (၁)/ကမရ ဖြင့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
သို့ရာတွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ၊ ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်) သည် ဥရောပ ခရီးစဉ်အတွင်း မိန့်ခွန်းများ ပြောကြားရာ၌လည်း မြန်မာနိုင်ငံကို Burma ဟုသာ သုံးနှုန်း ပြောဆိုနေကြောင်း မီဒီယာများမှ ကြားသိရပြန်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို လေးစား လိုက်နာရေး အတွက် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၀(ဌ)နှင့်အညီ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) သို့ ၂၈-၆-၂၀၁၂ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၄/နငရ-မပတ (၁)/ကမရ ဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ အမည်ကို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေပါအတိုင်း သုံးနှုန်း ရေးသား/ပြောဆိုရန် ထပ်မံအသိပေး အကြောင်းကြား လိုက်ကြောင်း သတင်း ထုတ်ပြန်အပ်ပါသည် ။
ယင်းထုတ်ပြန်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှ တာဝန်ရှိသူ ဦးအုန်းကြိုင်က “အဲဒီ့ကိစ္စက ဥက္ကဋ္ဌက သူဘယ်နေရာမှာ သုံးလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူ တည်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ ဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်ပြောတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒါလိုသူသုံးနှုန်းခဲ့တာ ကလဲ သူမှာ အကြောင်းကိစ္စ ရှိမယ်ထင်ပါတယ် ”ဟုပြောသည်။
လေဘာပါတီ ရုံးချုပ်သစ် ဖွင့်ပွဲကို ဇွန် ၂၆ က လန်ဒန်မြို့မှာ ကျင်းပခဲ့ရာ တက်ရောက် ဖွင့်လှစ်ပေးတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို လေဘာပါတီ ခေါင်းဆောင် Ed Miliband က ကြိုဆို နှုတ်ဆက် (BBC)
မြန်မာ့သမိုင်းတွင် မော်ကွန်းထိုးရမည့်ဖြစ်စဉ်ကြီးများ ယနေ့ မြန်မာ့ပြည်တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက် ရှိပါသည်။
မိမိတို့ နိုင်ငံမှ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား ချီးမြင့်သော ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗယ်လ် ဆု အား နိုင်ငံ့ ဂုဏ်၊ မြန်မာ တမျိုးသားလုံး ကိုယ်စား ဆောင်ယူမြင့်တင်ကာ လက်ခံရယူအပြီး အလွန်ကြီးမြတ်လှသော တိုင်း ကမ္ဘာသိမွန်မြတ်လှသော ငြိမ်းချမ်းမှု ဆုတံဆိပ်များ၊ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များဧ။် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအပေါ် ကောင်းကျိုးသက်ရောက်စေမည့် ထောက်ခံအားပေးမှုများကို ဆောင်ယူပြီး နိုင်ငံ အနာဂတ် ရောင်ခြည်အလင်းများ တပွေ့တပိုက်ဖြင့် အမိမြေဆီသို့ ယခုရက်ပိုင်း အတွင်း ဆိုက်ရောက်တော့မည်ဖြစ်ပါသည်။ လာမည့် 30 ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် သို့ လူထုခေါင်းဆောင်ကြီး ရောက်ရှိ ခြေချတော့မည်ဖြစ်ပါသည်။
သမိုင်းတခေတ်တွင် တကြိမ်တခါမျှသာ ကြုံဆုံခွင့် ရနိုင်သော ယခု ကဲ့သို့ ထူးခြား အံ့ဘနန်း အဟုန် အရှိန်ပြင်းစွာ ဂုဏ်ယူလေးစားဖွယ် အောင်ပွဲခံ အပြန်ခရီးကို မြန်မာပြည်ကိုချစ်သော မြန်မာ့ အနာဂတ် အရေးကို စိတ်ဝင်စားသော ပြည်သူပြည်သား မြန်မာနိုင်ငံသားများ အနေဖြင့် လှည်းနေလှေအောင်း မြင်းဇောင်းမကျန် လမ်းခရီးတလျောက် စောင့်ဆိုင်းကြိုဆို ဂုဏ်ပြုခြင်းဖြင့် မြန်မာဟူသည် ဒီလို ဟု ဇာတိဂုဏ်ပြသကြပါရန် လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းပါသည်။
ဥရောပ ငါးနိုင်ငံသို့ ၁၆ ရက်ကြာ ခရီးလှည့်လည်ပြီး ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့သို့
ဝေစန္ဒာ- ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြင်သစ်လွှတ်တော် ဥက္ကဌအဖြစ် ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံထားရသူ Claude Bartolone က ဇွန် ၂၈ ရက်တွင် တွေ့ဆုံစဉ်။ photo by BBC Burmese
AFP ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၈ ရက်က ပြင်သစ် သမ္မတဟောင်း Mr. Nicolas Sarkozy နှင့်ဇနီး Mrs. Carla Bruni Sarkozy တို့ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံအပြီး ပဲရစ်မြို့ ရီဂျင်နယ် ဟိုတယ်မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာ လာစဉ်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့တော်ကို ရောက်ရှိနေတဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေ စီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြင်သစ်သမ္မတဟောင်း Nicolas Sarkozy နဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ Carla Bruni တို့က ဒီကနေ့မနက်ပိုင်း တည်းခိုရာဟိုတယ်ကို လာရောက် တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
ဒီတွေ့ဆုံတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ခရီးစဉ် တလျှောက်လုံးလိုက်ပါသွားတဲ့ NLD ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ကိုဇေယျသော်က အခုလိုပြော ပါတယ်။
"ပြင်သစ်သမ္မတဟောင်း Mr. Sarkozy ရယ် သူ့ရဲ့ဇနီး Carla Bruni ရယ်နဲ့ ဟိုတယ်မှာပဲ တွေ့ပါတယ်ခင်ဗျား။ အမေစု အနေနဲ့ အခုကတော့ museum တစ်ခုကို သွားပါတယ်ဗျ။ Museum ကအပြီး အခုလောလောဆယ်မှာ ကျွန်တော်တို့က ဆီးနိတ်ကို သွားဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်"
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီကနေ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့မှာ ပြင်သစ် ပါလီမန် ၂ ရပ်စလုံးကို တက်ရောက်ပြီးရင် ဥရောပခရီးစဉ် အဆုံးသတ် မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီကနေ့ ပြင်သစ် အမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့ အထက် လွှတ်တော် ၂ ရပ်စလုံးကို သွားရောက် မလေ့လာခင်မှာ ပဲရစ်မြို့က ဆောဘွန်း (Sorbone university) တက္ကသိုလ် မှာ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေကို စကားပြောမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပဲရစ်မြို့ကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို မထွက်ခွာခင် မနက်ဖြန်မနက်ပိုင်းမှာ နာမည်ကြီး Orsay ပြတိုက်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက် ကြည့်ရှုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မနေ့ကလည်း ပဲရစ်မြို့တော်ခန်းမ မှာ ပြင်သစ်ရောက် မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံ အမှာ စကား ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မနက်ဖြန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန် လည် ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီး အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်တွေ အပါအဝင် လူအများအပြားက မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်မှာ ကြိုဆိုဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။
ရန်ကုန်ပြန်ရောက်လာရင် လေဆိပ်ကနေ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းက အိမ်အထိ လမ်းဘေးဝဲယာကနေ သောင်းသောင်းဖျဖျ ကြိုဆိုကြဖို့ မြန်မာ့လူမှုဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကွန်ယက်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ကြီးဟောင်း ကိုနေမျိုးဇင်က ဦးဆောင်စီစဉ်နေပါတယ်။
RFA၂၀၁၂ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆု ဆန်ခါတင် ဆုရွေးချယ်ခံခဲ့ရသူ အလုပ်သမားနဲ့ လယ်သမားအရေး ဆောင်ရွက်သူ ရှေ့နေ ကိုဖိုးဖြူကို ကိုမင်းကိုနိုင်က ဆုလက်မှတ် ပေးအပ်နေစဉ်။
၂၀၁၂ ပြည်သူ့ဂုဏ် ရည်ဆု ဆန်ခါတင် ဆုရွေးချယ် ခံခဲ့ရသူ ၅ ဦးကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ အခမ်းအနား တရပ်ကို ရန်ကုန်မြို့ တော်ဝင်နှင်းဆီခန်းမမှာ ဒီကနေ့ နေ့လည်က ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
အခမ်းအနားမှူး ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ဒေါ်ဆွေဇင်ထိုက်က ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အဖွဲ့ကိုယ်စား သ၀ဏ်လွှာဖတ်ကြားပြီး ဒီနှစ်အတွက် ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ ဆန်ခါတင် ၅ ဦးရဲ့ ပြည်သူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်း ဗီဒီယိုတွေကို ပြသပြီး ဂုဏ်ပြုဆု ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။
အခမ်းအနားမှာ ဆန်ကာတင်ဆုရခဲ့တဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းတွေကို နိုင်ငံရေး လူမှုရေးနဲ့ စာပေနယ်က လူပုဂ္ဂိုလ်တွေက အဖွဲ့ကိုယ်စား ဆုလက်မှတ် ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
NLD လူမှုအထောက်အကူပြု အဖွဲ့ကိုယ်စား ဦးဝင်းထိန်ကို စာရေးဆရာ မောင်မိုးသူက ဆုချီးမြင့်ခဲ့သလို သုခရိပ်မြုံ လူငယ် ပရဟိတဂေဟာ ကိုယ်စား စာရေးဆရာမ စုထားကို ဦးဝင်းတင်က ဆုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
သုခဆေးခန်းက ဒေါ်သန်းမြင့်အောင်ကို ရွှေအမြုတေ အယ်ဒီတာချုပ် ဦးဝင်းငြိမ်း၊ အလုပ်သမားနဲ့ လယ်သမားအရေး ဆောင်ရွက်သူ ရှေ့နေ ကိုဖိုးဖြူကို ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများအဖွဲ့က ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကချင်လူမှုရေးလုပ်ဆောင်သူ လဖိုင်နော်မိန်း ကိုယ်စား ကိုဧရာမောင်မောင်ကို ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ဖြူဖြူသင်းတို့က ဆုလက်မှတ်တွေ ပေးအပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီနှစ်အတွက် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆု ရရှိခဲ့တဲ့ ကချင်တိုင်းရင်းသား လဖိုင်နော်မိန်းဟာ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေအပြင် Kachin land News သတင်းဌာနရဲ့ သတင်းထောက်ချုပ် အဖြစ်လည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ် ဇန်နဝါရီလမှာ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေကို သွားရောက် သတင်းယူနေခဲ့စဉ်မှာ သေနတ်ကျည်ဆံ ထိမှန်တဲ့ဒဏ်ရာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး မလှုပ်ရှားနိုင်တော့ဘဲ ဒုက္ခိတဘ၀ ရောက်ခဲ့ရသူ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုကို မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကို ကိုယ်ကျိုးစွန့် ဆောင်ရွက်နေသူတွေကို ဂုဏ်ပြုကူညီဖို့အတွက် ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် အသင်းကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး နှစ်စဉ်ပေးအပ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
RFA ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ အတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ် သို့ရောက်ရှိ နေသော ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ အဖွဲ့က မနီလာသိန်းနှင့် မမီးမီးတို့ ရခိုင် ဒုက္ခသည် များအရေး တွေ့ဆုံစကား ပြောနေစဉ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်က အခြအနေတွေဟာ တင်းမာနေဆဲဖြစ်ပြီး ရခိုင်နဲ့ မွတ်ဆလင် နှစ်ဘက်ကြားမှာ စစ်တပ်က လုံခြုံရေး တင်းတင်းကျပ် ကျပ် ယူထားရဆဲ ဖြစ်တယ်လို့ အဲဒီကိုရောက်ရှိနေတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။
"ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကတော့ လောလောဆယ် ဒီနောက်ဆုံး အခြေအနေကတော့ ရခိုင်နဲ့ သူတို့ မွတ်ဆလင်တွေကို သူတို့ သီးခြားထားထားပြီးတော့ ကြားထဲကနေပြီးတော့ စစ်တပ် ခံပြီးတော့ လုံခြုံရေးအနေနဲ့ ထားထားတာကိုတွေ့ရပါ တယ်။ နောက်ပြီးတော့ အခုလက်ရှိမှာလည်း စခန်းတွေမှာလည်း အလှူရှင်တွေ လာရောက်လှူဒါန်းနေတယ်ပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ ပုဂ္ဂလိက အလှူရှင်တွေက များပါတယ်။ အစိုးရဘက်က လှူဒါန်းတာဆိုလို့ အနည်းငယ်သာ တွေ့ရပါသေးတယ်။ နောက် WFP ရဲ့ ဆန်အိတ် လှူဒါန်းမှုတော့ ရှိတယ်"
အီဂျစ်များ ယနေ့ မြန်မာ သံရုံးရှေ့တွင် ဆန္ဒပြမှု နောက်ဆက် တွဲနှင့် ၀ါဒဖြန်မှုများ
by Thiri Grace (Facebook)
وتعتبر ولاية أراكان ( والتي هي عبارة عن شريط ترابي ضيق يقع على خليج البنغال ) همزة الوصل بي آسيا المسلمة والهندوسية وآسيا البوذية ، حيث يكاد يكون من شبه المستحيل التعايش بين أغلبية بوذية " الراخين " وأقلية مسلمة مضطهدة " روهينج ياس " .
စစ်တွေ ဈေးကြီးရှိ မွတ်ဆလင် လူမျိုးများပိုင် ဈေးဆိုင်များမှ ပစ္စည်းများကို အာဏာပိုင်များ၏ အကူအညီဖြင့် သူတို့နေထိုင်ရာ ကျေးရွာ ရပ်ကွက်များသို့ ပြောင်းရွှေ့နေကြောင်း သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် နယ်စပ်မြို့ မောင်တောတွင် ဆူပူအကြမ်း ဖက်မှုများကြောင့် အရေးပေါ် အခြေအနေနှင့် ညမထွက်ရ အမိန့် ထုတ်ပြန်ထား သည့်ကြားမှ လုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် လုံထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးထံမှမွတ်ဆလင် (၅)ဦးက ၀ိုင်းပြီး လက်နက်လုရန် ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွါးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ပြန်လည် လန်းဆန်းစေလိုသည့် ရန်ကုန်စက်မူ့  တက္ကသိုလ်
"ပြန်လည် လန်းဆန်းစေ လိုသည့် ရန်ကုန်စက်မူ့  တက္ကသိုလ် (ကြို့ကုန်း)
(သို့မဟုတ်) အင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းသား/သူ များဖြင့်
ပြန်လည် သက်ဝင် လူပ်ရှားသင့်ပြီဖြစ်သော ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ် (ကြို့ကုန်း)"
၁၉၂၄ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်လက်အောက်တွင် အင်ဂျင်နီယာဌာန ( Department of Engineering) အဖြစ် တည်ရှိခဲ့ပြီး ၁၉၆၃ ခုနှစ်လောက်တွင် ရုရှားနိုင်ငံမှ လက်ဆောင်အဖြစ် တည်ဆောက်ပေး ခဲ့သော ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ် (ကြို့ကုန်း) သည် အင်ဂျင်နီယာနှင့် ဗိဿုကာကျောင်းသား/သူများကို (၁၉၉၈)
ခုနှစ်ထိ ပညာရည်နို့သောက်စို့ရာ မိခင်ကျောင်းတော်ကြီးအဖြစ်တည်ရှိခဲ့သည်။
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကို အမှတ်များများဖြင့်အောင်မြင်ပြီး စက်မှုတက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူတိုင်းသည် ပထမနှစ်မှစတင်၍ ဆဋ္ဌမနှစ်ထိတိုင်အောင် (၆) နှစ်တာ မိခင်ကျောင်းတော်ကြီးတွင် ပညာသင်ခွင့် ရရှိပြီး အောင်မြင် ပြီးမြောက်ပါက ( B.E. /B.Arch.)ဘွဲ့များကို ချီးမြှင့်ပါသည်။ ထို့ပြင် စက်မှုစိုက်ပျိုးနှင့် အသက်မွေးပညာဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိ စက်မှု/လက်မှု သိပ္ပံကျောင်းများမှ (၃) နှစ်တာ ပညာသင်ကြားပြီးစီး အောင်မြင်ထားသော (A.G.T.I.) လက်မှတ် ရရှိထားသူများထဲမှ အရည်အချင်းပြည့်မှီသူ အနည်းစုကိုလည်း ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကျင်းပပြီး အရည်အချင်းကိုသေချာစွာစီစစ်၍ ထိုက်သင့်သူတို့ကိုလည်း စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်း(ကြို့ကုန်း)တွင် တတိယနှစ်မှစ၍ ပညာသင်ကြားခွင့်
ပြုခြင်းလည်း ရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့ကိုလည်း ဆဋ္ဌမနှစ်အထိ ပညာများကို သင်ကြားအောင်မြင်ပြီးလျှင် ( B.E. , B.Arch.) ဘွဲ့များ ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ မွေးထုတ်ပေးလိုက်သော အင်ဂျင်နီယာနှင့် ဗိဿုကာများသည် နိုင်ငံ
တော်တည်ဆောက်ရေးတွင် အရေးကြီးသောနေရာ၌ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြပါသည်။
မန္တလေးတွင် စက်မှု သင်တန်းကျောင်း အဖြစ် ဂျာမနီက တည်ဆောက်ပေးခဲ့သော အဆောက်အဦးကို (၁၉၉၁) ခုနှစ်၊ နှောင်းပိုင်းတွင် မန္တလေးစက်မှုတက္ကသိုလ် အဖြစ် စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အင်ဂျင်နီယာများ မွေးထုတ်
ပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် (၁၉၉၃) ခုနှစ်တွင် မေမြို့၌ တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၀
ခုနှစ်တွင် A.G.T.I. (၃) နှစ် သင်တန်းပြီးစီးသူများထဲမှ အဆင့်မီသူများအား နောက်ထပ် (၂)နှစ် ပညာသင်ကြား
စေပြီး B-Tech. ဘွဲ့ပေးမည့်စနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် B.E. ဘွဲ့ကိုရရှိစေရန် နောက်
ထပ် (၁)နှစ် ထပ်မံ ပညာသင်ကြားရခြင်း စနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့ပါသည်။
ထိုကြောင့် ယခင်ကတက္ကသိုလ်ဝင် တန်းစာမေးပွဲကို အမှတ်များများဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့သူ စက်မှုတက္ကသိုလ်
ကျောင်းသားများ အတွက် (၆) နှစ်တာပညာသင်ကြားပြီး၊ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံမှ A.G.T.I. အောင်လက်မှတ် ရရှိ
ထားသူ အနည်းစု အတွက် (၇) နှစ် ပညာသင်ကြားလာခဲ့ရာ ယခု A.G.T.I. အောင်လက်မှတ်အတွက် (၂)နှစ်၊ B.Tech. ဘွဲ့အတွက် (၂) နှစ် ၊ B.E. ဘွဲ့အတွက် (၁) ဟူ၍ (၂)+ (၂)+ (၁) စုစုပေါင်း (၅)နှစ် စနစ်ကိုကျင့်သုံး
ပါသည်။ သင်ကြားသောသင်ရိုးများတွင်လည်း A.G.T.I.(၂)နှစ်ပြီးလျှင် B.Tech. မှတဆင့် B.E. သို့ကူးရသော
သင်ရိုးများဖြစ်သောကြောင့် မြင်လွယ်သော ဥပမာတခုအနေဖြင့် ဆေးပညာသင်ကြားခြင်းတွင် သူနာပြုသင်တန်း
အောင်မြင်ပြီးမှ ဆရာဝန်ပညာကို ဆက်လက်သင်ကြားရသလိုဖြစ်နေသောကြောင့် အဆင်မပြေဖြစ်ရသည်။ သူ
နာပြုတတ်သိရမည့်အခြေအနေနှင့် ဆရာဝန်များတတ်သိရမည့် အခြေအနေမှာ အပိုင်းအခြားရှိသည်ကို အလွယ်
ထိုအချိန်အတောအတွင်း ပထမ (၂) နှစ်တွင် A.G.T.I. လက်မှတ်ရရှိပြီး B.Tech. ရရှိရန် အဆင့် မမီ
သောသူများသည် ထိုအခြေအနေ၌ ရပ်၍၎င်း ၊ B.Tech. အောင်မြင်ပြီး အဆင့်မမှီသော သူများလည်း B.Tech. ဘွဲ့ဖြင့်သာရပ်၍ B.E. ဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ပါ။ ထို့ကြောင့် ကျောင်းသားမိဘများသည် မိမိတို့သားသမီးများ၏ပညာရေး
တွင် ပန်းတိုင်သို့ရောက်ရှိနိုင်ရေးအတွက် အလွန်ပူပန်ကြရပါသည်။ လမ်းတဝက်တပျက်နှင့် ရပ်ဆိုင်းသွားမည်ကို အလွန်စိုးရိမ် ကြရပါသည်။နှစ်တော်တော်ကြာသော် ပေါင်းကူးစာမေးပွဲများ ရံဖန်ရံခါ ပြုလုပ်ပေးတတ်သော်လည်း ကန့်သတ်ချက်များ များလွန်းပြီး၊ အင်ဂျင်နီယာပညာ၌ အားနည်းစေကာမူ အင်္ဂလိပ်စာအောင်သော ကျောင်း
သား/သူများကို ဦးစားပေးခြင်းဖြင့် အနည်းငယ် သာတက်ခွင့် ရရှိခဲ့သည်ကိုလည်း ရှိခဲ့ပါသည်။
ထိုအတောအတွင်း နည်းပညာကောလိပ်/တက္ကသိုလ်များ ကို မြန်မာတနိုင်ငံလုံးတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်
တိုးချဲ့တည်ဆောက်လာခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွင် ကျောင်းသား/
သူများ ပညာသင်ခွင့်မရတော့ဘဲ ဆရာအများစုအပါအဝင် ကျောင်းသား/သူများသည်ထိုကျောင်းသစ်များသို့ သွား
ရောက်ကြရပါသည်။ ကျောင်းမှသင်ကြားရေး အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများကို အခြားကျောင်း အများအပြားသို့ ပျံနှံ့ရောက်ရှိသွားပြီး၊ စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းကြီးမှာလဲ ချုံနွယ်မြက်ရိုင်းကြားတွင် ပုန်းကွယ်၍ နေခဲ့ရပါသည်။
ကျောင်းသစ် အများစုတွင် ကျောင်းဆောင်အဆောက်အဦးသာ ရှိပြီး ၊ အင်ဂျင်နီယာကျောင်းတွင် ရှိသင့်
သောလက်တွေ့ခန်းများ၊ လက်တွေ့လုပ်ရသော (work shop) များ၊ လုံလောက်စွာ မရှိသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။
အသစ်တည်ဆောက်သော ကျောင်းတိုင်းသည် သက်ဆိုင်ရာဒေသ၏ မြို့များနှင့် လွန်စွာဝေးကွာသောကြောင့် ကျောင်းသား/သူများနှင့် ဆရာ/မများမှာ အချိန်ကုန်ခြင်း၊ ခရီးပန်းခြင်းဒဏ်ကိုခံစားကြရပါသည်။
ကျောင်းများတွင် ရှိသော ဆရာ/မများကို ထပ်မံတိုးချဲ့ဖွင့်သော ကျောင်းများသို့ သွားရောက်ရန်စေခိုင်း သောကြောင့် အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဆရာ/မအများစုမှာ နှုတ်ထွက်သွားကြပါသည်။ ဆရာ/မများအတွက် သင်ကြားရေးအထောက်အကူ ပြုသင်တန်းများလည်း နည်းပါးနေခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းသား/သူများကိုလည်း အမှတ်နိမ့်နိမ့်ဖြင့် ဝင်ခွင့်ပေးခဲ့သော
ကြောင့် အင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းသား/သူ အရည်အတွက်များပြီး ၊ ထူးချွန်ပြောင်မြောက်သော ကျောင်းသား/သူ ရှားပါးလာပါသည်။ စာမေးပွဲစစ်ဆေးရာတွင်လည်း သက်သက်ညှာညှာစစ်ဆေးပြီး အတန်းတက်ခွင့် ပြုခဲ့ပါသည်။
ဤသို့ ဖြင့် အင်ဂျင်နီယာ ပညာရေးသည် တနေ့တခြားအားနည်း ၍ လာခဲ့ရပါသည်။
နောက်ပိုင်း အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသား/သူများတွင် အရည်အချင်းပြည့်မှီသူ အလွန်နည်းပါးလာသည့်အ
ပြင် ဆရာ/မများမှာလည်း မနိုင်ဝန်ကိုထမ်းရခြင်း (ဆိုလိုသည်မှာ ဆရာ/မရှားပါးသောကြောင့် တယောက်တည်း
ဘာသာရပ်များစွာကို သင်ကြားပေးရခြင်း) ကြောင့် ကိုယ်တိုင်တွင်လည်း ယုံကြည်မှုနည်းပါးလာပါသည်။ ဆရာ/မ
များကိုယ်တိုင်ကလည်း ကျောင်းသား/သူများ၏ အရည်အချင်း နည်းပါးလာသည်ကိုလည်း သိ၍လာခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အပြင် လူငယ်အင်ဂျင်နီယာများကိုလည်း ပြင်ပအလုပ်ဌာနမှ အသိအမှတ်ပြုမှုနည်းလာခြင်း၊ ပညာရပ်ပေါ်တွင်
ယုံကြည်မှုအားနည်းလာခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေလာခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတကာ အထူးသဖြင့် အာဆီယံနိုင်ငံများတွင်
လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ အင်ဂျင်နီယာများကို တန်ဖိုးထားမှုနည်းလာပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါသောကြောင့် တိုင်းပြည်၏ဂုဏ်ဆောင်အင်ဂျင်နီယာတက္ကသိုလ်ဖြစ်ခဲ့သော ယခုအချိန်တွင် ကျိန်း
သေပေါက် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိနေသော ရန်ကုန်စက်မူတက္ကသိုလ် (ကြို့ကုန်း)ကျောင်းတော်ကြီးတွင် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်
စာမေးပွဲတွင် အမှတ်များများရရှိခဲ့သော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအား ပထမနှစ်မှစ၍ ဆဋ္ဌမနှစ်အထိတဆက်
တည်း ပညာသင်ကြားစေပြီး အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့၊ ဗိဿုကာဘွဲ့များကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဆွတ်ခူးရရှိစေရန် ပညာ
သင်ကြားခြင်းစနစ် အခွင့်အလမ်းကောင်းကို ပြန်လည်ရရှိသင့်ပြီဖြစ်ပါသည်။
သို့ရာတွင် လက်ရှိဖွင့်လှစ်ပြီးသော ကျောင်းများအား ပိတ်ပစ်စေခြင်း မဟုတ်ဘဲ ထိုအရပ်ဒေသ ရှိ ကျောင်းသား/သူများ ပညာသင်ကြားရမည့်အပြင် ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်နှင့်ဆက်နွယ်နိုင်ရန်တို့အတွက် ယခုလက်ရှိ စက်မူတက္ကသိုလ်အသစ်များ၏ အကြီးအကဲများ၊ ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ် အကြီးအကဲ များနှင့် အထက်အဖွဲ့အစည်းများ လက်တွဲညီညာစွာဖြင့် ( နည်းလမ်းကောင်းများ ရှာဖွေ၍) ပူပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါရန် အကြံပြုတင်ပြအပ်ပါသည်။
ပြည်သူ လူထုထံမှ ငွေကြေး လိမ်လည် ကောက်ခံ နေသော ကောင်းမွန်ကုမ္ပဏီ
မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဦးဖုန်းမော်ရွှေ (ယခင် တ.ယ.က ဥက္ကဌဟောင်း)
အစုရှယ်ယာ ထည့်ဝင်ထားသော ကောင်းမွန် ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီသည်
ရေနံချောင်းမြို့နှင့် နတ်မောက်မြို့ မှ မကွေးသို့သွားသောလမ်းတွင်
မကွေးမြို့သို့ မရောက်မှီ (၇)မိုင် ခန့်အကွာတွင် လမ်းအသုံးပြုခ
ကောက်ခံရေးစခန်း ဖွင့်လှစ်ပြီး ဆိုင်ကယ် (၁)စီးလျှင် (၁၀၀)ကျပ်နှုန်းဖြင့်
မကွေးမြို့သို့မရောက်မှီ ၇မိုင်၅ဖာလုံတွင် နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မကွေး)
ကံပြားကျေးရွာ (အရှေ့ရွာ /အနောက်ရွာ)၊ ၅မိုင်၆ဖာလုံတွင်ကံလှရွာ၊
၄မိုင်၃ဖာလုံတွင် ဒဟတ်ကန်ကျေးရွာ၊ စသည့် ဖြင့် အနီးတ၀ိုက်တွင်
ကံပြားအရှေ့ကျေးရွာ နှင့် ကံလှကျေးရွာ နှစ်ရွာ
ကြားတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန မှ ဖွင့်လှစ်ထားသော
မြို့ဝင်ကြေးကောက်ခံသော စခန်းမှာ သင်ကြားရေးဆေးရုံကြီး မရောက်မီ
လမ်းအသုံးပြုခနှင့် မြို့ဝင်ကြေးကောက်ခံသော စခန်းအပြင်ဘက်တွက်ရှိသော
ကံပြားကျေးရွာ(အရှေ့)၊ကံပြားကျေးရွာ(အနောက်)၊ ကံသာကြီးကျေးရွာ၊ ကံသာလေး
ကျေးရွာ၊ ညောင်ပင်ရွာ၊ ကျစ်ဆုံမွှေးကျေးရွာ စသည့်ကျေးရွာများမှ
ရွာသူ/ရွာသားများသည် ကျန်းမာရေး ကိစ္စအကြောင်းကြီးငယ် ရှိလျှင်
မကွေးမြို့တွင်းတွင်ရှိသော ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး(မကွေး) သို့ မသွားရောက်ဘဲ
ငွေကုန်ကြေးကျ သက်သာသော သင်ကြားရေးဆေးရုံကြီး(မကွေး) သို့သာ အားကိုးတကြီး
မကွေးမြို့ ထဲသို့ မသွားပဲ မြို့ပြင်တွင်ရှိသော
သင်ကြားရေးဆေးရုံသို့ သွားရောက်ရာတွင် ကောင်းမွန်ကုမ္ပဏီမှ မြို့ဝင်ကြေးဟု
အမည်တပ်ပြီး ဆိုင်ကယ်(၁)စီးလျှင် (၁၀၀) ကျပ်နှုန်းဖြင့် ကောက်ခံသည်ကို
ထို့အပြင် ဒေသတွင်းကျေးရွာများ ဖြစ်သည့် ကံလှ ကျေးရွာ ဒဟတ်ကံကျေးရွာ
များသို့ ဒေသတွင်းကိစ္စများဖြင့်သွားရောက်ရာတွင်လည်း သွားရောက်ရာတွင်လည်း
ကံပြားကျေးရွာမှ တောင်သူများသည် မိမိတို့သီးနှံများစိုက်ပျိုးထားသော
စိုက်ပျိုးမြေများသို့သွားရောက် ကြရာတွင်လည်း ဆိုင်ကယ်ဖြင့်သွားရောက်ပါက
ထိုသို့ မြို့ထဲသို့ မသွားသော ဆိုင်ကယ် များကို မြို့အပြင်(၇မိုင်)
ခန့် မှ တနေ့လျှင်ပျမ်းမျှ ဆိုင်ကယ်အစီးရေ (၈၀၀) မှ (၁၀၀၀) ခန့်ကို
မြို့ဝင်ကြေးဟု အမည်တပ်ပြီး အများပြည်သူများထံမှ ငွေကို
လိမ်လည်ကောက်ခံနေခြင်းကို အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သော အကြီးအကဲ
များသိရှိစေရန်နှင့် အများပြည်သူများသိရှိစေရန် သစ်ထူးလွင်မှ တဆင့် ဖော်ပြပေး လိုက်ပါသည်။
မြို့ နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးသက်လွင် စက်သုံးဆီ အရောင်းဆိုင်များ အပေါ် အဆမတန် ငွေကောက်ခံနေ (ပေးစာ)
ကျနော်သည် မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး သရက်ခရိုင် အထက် မင်းလှမြို့ မှ ဒေသခံ
ဦးစိန်ဝင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်၏ မှတ်ပုံတင်အမှတ်မှာ ၈/ မလန ( နိုင်)
၀၁၄၆၇၉ ဖြစ်ပြီး မင်းလှမြို့ အမှတ် (၄) ရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်ပါသည်။
ယခုကျနော်တို့ မြို့ တွင် မြို့ နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးသက်လွင်သည် ဒေသခံ စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်များအပေါ်
၄င်း၏စီးပွါးရေးတစ်ခု အနေဖြင့်ငွေများ အဆမတန်ကောက်ခံနေပါသည်။
ကျနော်တို့ ဆီဆိုင်ပိုင်ရှင်များသည် တလလျှင် ၄င်းအားကျပ်သိန်း(၂၀) ပေးရပါသည်။ မပေးလျှင်မင်းတို့ဆိုင်တွေပိတ်ရမည်ဟုဆိုပါ့သည်။ ကျနော်တို့့လည်းတတ်နိုင်သမျှတော့ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးသက်လွင်သည် ၄င်းကိုယ်တိုင်လည်း အထက်မင်းလှရေနံမြေမှ ဆီများကိုခိုးထုတ်ခွင့် ရစေသော
ပါမစ်လက်မှတ်များပြုလုပ်ကာ ပါမစ်တစ်စောင်လျှင် ငါးသောင်းကျပ်နှုန်းဖြင်လစဉ်ဆီခိုးပါမစ် စောင်ရေ (၁၀၀)ခန့် ကိုပြုလုပ်ပြီးစီးပွါးရှာနေပါသည်။
ထို့ အပြင် ၄င်းသည် ၈င/၈၀၅၀ ဆီဘောက်ဆာကားဖြင့်ရေနံစိမ်းများခိုးထုတ်ကာ မုံရွာမြို့ သို့ ပို့ ဆောင်နေပါသည်။ ငါက မြို့ နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးကွ မင်းတို့့တိုင်ချင်ရာတိုင်လို့ ရသည်ဟု ဒေသခံများနှင်အဆင်မပြေတိုင်းပြောလေ့ရှိပါသည်။
မြို့ နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးဦးသက်လွင်သည်၎င်းကိုယ်တိုင်တရားမ၀င်လောင်စာဆီများကို
အောင်ရှာဖွေစားသောက်နေကြသော ဒေသခံပြည်သူများအပေါ် အတင်းအကြပ်ငွေကြေးတောင်းခံမှူများကို သစ်ထူးလွင် မှတဆင့် အထက်လူကြီးများသိရှိစေရန် တင်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
မောင်တောဒေသခံ နစကတပ်ဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦး ၏ ပေးစာ
၄င်းနေ့နေ့ လည်၂ နာရီခန့် တွင်ဘဂါင်္လီ ကုလားများ ဆုတောင်း အပြီးတွင် မြို့မ ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် ယူနှိုက်တက် ဧည့်ရိပ်သာကို ခဲဖြင့် ပေါက်ပြီး မီးရှို့ရန် ကြံရွယ်နေစဉ် ရဲတပ်ရင်း အမှတ် ၂ တပ်ဖွဲ့ ဝင်များ သေနတ်ဖြင့် မိုးပေါ်သို့ ထောင်ပစ်ခတ်သဖြင့် ၄င်းဘင်္ဂါလီလူစုမှ ရပ်ကွက် ၄ ဗိုလ်မှူးရွာ သဇင် ဧည့်ရိပ်သာ ဘက်သို့ ရွေ့ လျား စုရုံးလာပြီး ဧည့်ရိပ်သာကို မီးရှို့ ရန် အော်ဟစ်နေစဉ် နစက ကွပ်ကဲရေးမှူး ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အောင်ကြီးမှာလည်း ကိုယ်ရံတော် တပ်ဖွဲ့ ဝင်များနှင့် အတူကားနှစ်စီးနှင့် ၄င်းဆူပူနေသော ဘင်္ဂါလီလူစုနှင့် ကိုက်တစ်ရာခန့် အကွာသို့ ရောက်ရှိနေပြီး အချိန်မှီ တားဆီး နိုင်ပါလျှက် မျက်ကွယ်ပြုပြီး ဆူပူမူုဖြစ်နေသော ဘင်္ဂါလီ လူစုနှင့်၂ ဖာလုံခန့် ကွာဝေးသော ဆေးရုံဝင်း အတွင်းသို့ ကားကို နောက်ဆုတ် ရပ်တန့် စဉ် အတွင်း တွင် သဇင် ဧည့်ရိပ်သာနှင့် ဗိုလ်မူးရွာ အိမ်တန်းကို မိးရှို့ ပြီး ဒေါက်တာခင်မောင်လတ်တို့တစ်အိမ်သားလုံး ကိုလည်း ဓါးဖြင့်ထိုး လုယက် အကြမ်းဖက်နေခြင်းများကို ၄င်း နစကဒုဗိုလ်မှူးကြီး အောင်ကြီး မှ မတားဆီးပဲ မျက်ကွယ် ပြုနေခဲ့ပါသည်။
၄င်းနာရီပိုင်းအတွင်းမှာပဲ မောင်တောမြို့နယ်ရှိဝေသာလီရွာ၊ ရွှေရင်အေးရွာ၊ ခရေမြိုင်ရွာ၊ ကန်သာယာရွာ၊ ဗောဓိကုန်းရွာ၊ သရီကုန်ဘောင်ရွာ၊ ကိုင်းကြီးရွာ၊ မောရ၀တီရွာ များကိုလည်းမီးရှို့ လုယက် သတ်ဖြတ်ခံရခြင်းမှာလည်း ၄င်းနစကတပ်ဖွဲ့ မှ နယ်စပ် တလျောက် ကုလားကျေးရွာများ၌ တဖက် နိုင်ငံမှ တရားမ၀င် GSM တယ်လီဖုန်း တစ်လုံးလျှင် ၄၀၀၀၀ ကျပ်နှုန်းဖြင့် လာဘ်ငွေယူ၍ ရိုဟင်ဂျာ ဘင်္ဂါလီ ကုလား များအား ကိုင်ဆောင်ခွင့်ပြုထားခြင်းကြောင့် ဆက်သွယ်မူ အားကောင်းကာ နာရီပိုင်းအတွင်း အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကို ကျယ်ပြန့် စွာလုပ်ဆောင်သွားနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည် နယ်မြောက် ပိုင်းဒေသ များဖြစ်သော ဘူးသီးတောင်နှင့် မောင်တော မြို့နယ်များ၌ ရေကြီးရေလျှံမှု များဖြစ်ပေါ်ခဲ သောကြောင့်  ဒုက္ခသည်ဦးရေ ပိုမိုများပြားလာ ကြောင်းသိရသည်။
ဘူးသီးတောင်မြို့တွင် ရေဘေးသင့် ဒုက္ခသည်လူဦးရေ (၃၀၀)ခန့် ရှိပြီး အိမ်ထောင်စု(၆၀)ခန့် မှ ဒုက္ခသည်များ တိုးပွားလာသည်ဟု ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် လုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားသော ဒုတိယ ဗိုလ်မှုးတစ်ဦးက ဆိုသည်။
“အိမ်တွေထဲကို ရေတွေဝင်ပြီး တဲတွေပျက်စီးကုန်တယ်၊ ပုစွန်ကန်တွေလည်း တော်တော်ပျက်စီးတယ် တောင်တွေပါ ပြိုတော့တော်တော် အခက်အခဲ ဖြစ်နေပါတယ်။ ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုလည်း ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းဖွင့် ပေးထားပါတယ်”ပာု အထက်ပါ ဒု-ဗိုလ်မှုးက ပြောသည်။
မိုးသည်းထန်ခြင်းနှင့် ရေကြီးမှုများကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများသို့ ပိုဆောင်ပေးရမည့် ဆန်တင်ဆောင်လာသော ကားများမှာ လမ်းပျက်စီးမှုများကြောင့်ပိုဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိကြောင်းကိုလည်း ဒေသခံတစ်ဦးက ဆိုသည်။
“မေယုတောင်က မြေသားပဲ ကျတာတွေကြောင့်လမ်းပျက်စီးပြီး ဆန်ကားတွေရောက်တဲ့ နေရာမှာရပ်တန့်ထားရပါတယ်”ပာု ဒေသခံ ဦးလှရွှေက ပြောသည်။
ဘူးသီးတောင်မြို့ရှိ မြို့မဈေးအား ယာယီပိတ်ထားရပြီး ဘူးသီးတောင်ဆေးရုံမှ လူနာများအား အ.လ.က(၁) ကျောင်း သို့ ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားရကြောင်း သိရသည်။
ထိုပြင်ဘူးသီးတောင်မြိုနယ်အတွင်း ရေးကြီးရေလျှံမှုများကြောင့်ဒုက္ခသည်စခန်း(၅)ခုဖွင့် လှစ်ထား၍ အဆိုပါဒုက္ခ သည်စခန်းများမှာ အ.လ.က(၁) ဘူးသီးတောင်၊ သုဓမ္မာရုံစာသင်တိုက်၊ ရွှေကျင်ပရိယတိ စာသင်တိုက်၊ လမ်းမဘုန်းကြီးကျောင်း ၊မြတောင်ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်တိုက်စသည့် ကုန်းမြင့်နေရာများတွင် တည်ရှိသော နေရာများအား ရေဘေးဒုက္ခသည်စခန်းအဖြစ်`ထားရှိခြင်းဖြစ်သည်။
“မနက်ကတည်းကမိုးတိတ်သွားပါပြီ။မနေ့ ညကတည်းက ရွှာတဲ့မိုးပါ။ ဒေသခံတွေ တော်တော်လည်း ဒုက္ခရောက်ခဲ့ပါတယ်။”ပာု ဘူသီးတောင်မြို့ နယ်နေ ဦးဇော်သန်းဝေ ကပြောသည်။
မောင်တောမြိုနယ်နှင်ကျောက်တော်မြို့ နယ်များတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ ပြီး ကျောက်တော်မြို့ နယ်တွင် ဇွန်လ၂၆ရက်နေ့ ၌ လေဆင်နှာမောင်းတစ်ခုတိုက်ခတ် ခဲ့သောကြောင့် ဒေသခံ(၆၀)ကျော် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ဘူးသီးတောင်နှင့်မောင်တောမြို့နယ်များတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဒုက္ခသည် (၄၀၀၀)နီးပါးနှင့် ကျောက်တော်မြို့တွင် ဒုက္ခသည်(၁၀၀၀)ကျော် ရှိခဲ့ရာမှ ရေဘေးဒုက္ခသည်များပါ ထပ်တိုးလာခြင်းဖြစ်သည်။
ဓာတ်ပုံ - အောင်သူရ 7Day News Journal
တော်ဝင်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ က ဆောက်လုပ်နေသော မုဒိတာ (၂)တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာစီမံကိန်းမှ ထောင်ဂဏန်းခန့်ရှိသော လုပ်သားများသည် နှစ်ရက်စာလုပ်ခ လစာမရသဖြင့် ဇွန်လ ၂၈ ရက် နံနက် ၈ နာရီမှစ၍ ဆန္ဒပြနေကြသည်။
“နှစ်ရက်ကို နားလိုက်ပါ (တ နင်္လာ၊ အင်္ဂါ) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကျရင် ပြန်ဆင်း သုံးရက်ခကို အပြည့်ပေးမယ်လို့ ပြောတယ်။ ဆင်းတဲ့အခါကျတော့ နှစ်ရက်ခလည်း မပေးတဲ့အတွက် ဆန္ဒပြကြတယ်”ဟု အဆိုပါစီမံကိန်းတွင် လက်သမားတစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုမောင်မောင်ထွန်းက ပြောသည်။
ထို့ကြောင့် အလုပ်သမားများသည် ယနေ့နံနက်မှစ၍ ဆန္ဒပြခဲ့ပြီး ဆနပြအလုပ်သမားထဲမှ ခေါင်းဆောင် ၁၃ ဦးအား ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီခန့်တွင် တော်ဝင်ဆောက်လုပ်ရေးက ညှိနှိုင်းခဲ့ကြသည်။
ထိုသို့ ညှိနှိုင်းရာတွင် လုပ် သားအားလုံးကို အလုပ်ပြန်ခန့်မည်ဖြစ်ပြီး နှစ်ရက်စာလုပ်အားခကို ပြန်ပေးမည်ဖြစ်ကာ အပြစ်ရှိသူကိုဖြုတ်၍ လုပ်သားများကို သင်တန်းပေးမည်ဟု ကုမ္ပဏီဘက်မှ တာဝန်ရှိသူက ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော် အလုပ်သမားအ များစုမှာ ထိုပြောကြားမှုကို မယုံ ကြည်ဘဲ နစ်နာကြေးရရန်သာ တောင်းဆိုနေကြပြီး အလုပ်သမား ခေါင်းဆောင် ၁၃ ဦးနှင့် ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံညှိနှိုင်းနေကြသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နှင့် ပြင်သစ် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ (ရုပ်/သံ)
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နှင့် ပြင်သစ်နိုင် ငံခြားရေး ၀န်ကြီး မစ္စတာ လောရင့် ဖာဘီယပ်စ်တို့ ပဲရစ်မြို့ရှိ ပြင်သစ်နိုင် ငံခြားရေး ၀န်ကြီးရုံး ၀င်းအတွင်း ၀ယ် ဇွန်(၂၇)ရက်နေ့က အမှတ်တရ သစ်ပင် စိုက်ပျိုး ခဲ့ကြသည်။
(Photo-AFP) — ပြင်သစ်မှာ အမှတ်တရ သစ်ပင်စိုက်
should be carefully tailored and calibrated in order to help the process of reform. I do not think that I need to remind the people of France and the French government, how important are such values as liberty, equality and fraternity but for us, these are still prizes to be won through hard work and perseverance. (Daw Aung San Suu Kyi)
Jun 27, 2012 5:40pm
So investment, aid, whether developmental or humanitarian, should be carefully tailored and calibrated in order to help the process of reform. I do not think that I need to remind the people of France and the French government, how important are such values as liberty, equality and fraternity but for us, these are still prizes to be won through hard work and perseverance. (Daw Aung San Suu Kyi)
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်-ပြည်လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ မှော်ဘီမြို့နယ် အတွင်း၌ အမည်မသိ အမျိုးသားတစ်ဦးက နေအိမ်အတွင်းဝင်ရောက်ကာ အိမ်ရှင် အမျိုးသား အား ဓားဖြင့် ထိုးသတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဇွန်လ ၉ ရက် နံနက်၁နာရီခွဲတွင် ဒေါ်ခင်ဝင်း (ခ)ဒေါ်ဝင်းသည် ၄င်း၏ အမျိုးသား ၆၅ နှစ်နှင့်အတူနေ အိမ်အိပ်ခန်းတွင် မျက်နှာချင်းဆိုင် ခုတင်တစ်လုံးစီဖြင့် အိပ်နေခဲ့ကြောင်း၊ ထိုစဉ် ရုတ်တရက် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ၏ အော်သံကြောင့် လန့်နိုးပြီး ခင်ပွန်း ဖြစ်သူရှိရာနေရာသို့ လှမ်းကြည့်ရာ အသက် ၃၀ ခန့်ရှိ အမျိုးသားတစ်ဦး (စုံစမ်းဆဲ)က ခင်ပွန်းဖြစ်သူအား လုံးထွေးရိုက်နှက်နေသည်ကို တွေ့ရပြီး ပတ်ဝန်းကျင်သို့ အော်ဟစ် အကူအညီတောင်းရာ အဆိုပါအမျိုးသားမှာ ၄င်းထံသို့ပြေးလာပြီး သံတုတ်ဖြင့် ရိုက်နှက် ၍ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်း၊ ၄င်းရိုက်နှက်မှုကြောင့် ဒေါ်ခင်ဝင်းတွင် ဝဲဘက်နားထင် ဖူးရောင်၊ အောက်နှုတ်ခမ်း ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ပြီး ခင်ပွန်းဖြစ်သူမှာ ဝဲဘက်နံရိုး ပြတ်ရှ၊ နောက်ကျောတွင် ဓားတန်းလန်းစိုက်ဝင်နေသဖြင့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူအား မှော်ဘီဆေးရုံသို့ တင်ပို့ခဲ့ရာ ဆေးရုံအရောက်တွင် သေဆုံးသွားသည်။
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ အမည်မသိ အမျိုးသားအပေါ် အရေးယူပေးရန် ဒေါ်ခင်ဝင်းက တရားလိုပြုတိုင်တန်းထားကြောင်း သိရသည်။ အထက်ပါဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ မှော်ဘီရဲစခန်းက(ပ)၄၁၆/၁၂၊ ပုဒ်မ ၃၀၂/၃၂၅ ဖြင့်အမှုဖွင့်ပြီး ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအမျိုးသားအား ဖမ်းဆီးရမိရေး စုံစမ်းလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လူ့ အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားတဲ့ အဖွဲ့ ဝင်တွေနဲ့ပဲရစ်မြို့စိန်းမြစ်ထဲမှာ တွေ့ ဆုံ
(ဓာတ်ပုံ- AFP-ပြင်သစ် နိုင်ငံကို ရောက်နေစဉ် အတွင်း အစိုးရ မဟုတ်တဲ့ NGO အဖွဲ့ဝင် များနှင့် ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့က တွေ့ဆုံပွဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ကို ရုရှားနိုင်ငံတွင် ထောင်ကျခံနေရသော အတိုက်အခံ Mikhaïl Khodorkovsky ၏ သားဖြစ်သူ Pavel Khodorkovsky (၀ဲ) နှင့် ယူကရိန်းနိုင်ငံက ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရသည့် ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း Yulia Tymoshenko ၏ သမီးဖြစ်သူ Eugenia Tymoshenko (ယာ) တို့နှင့်အတူ တွေ့ရစဉ်။)
ဥရောပခရီးစဉ် နောက်ဆုံးခရီးတစ်ထောက်အဖြစ် ပြင်သစ်နိုင်ငံကို
ရောက်နေတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို မိမိတို့ ရဲ့ ယုံကြည်ချက် အတွက် လက်မလျှော့ဘဲ တိုက်ပွဲ ၀င်ကြဖို့ တိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လူ့ အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားတဲ့ အဖွဲ့ ဝင် ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပဲရစ်မြို့စိန်းမြစ်ထဲက ရေယာဉ်တစ်စီးပေါ်မှာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ က တွေ့ ဆုံခဲ့ပါတယ်။
ဒီတွေ့ ဆုံပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလူ့ အခွင့်အရေးအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်
တွေကို မိမိကိုယ်မိမိလေးစားကြတယ် ဆိုရင် ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်ကို မစွန့် လွှတ်ဘဲ တိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့ပြောဆိုပါတယ်။
ဒီပွဲကို ယူကရိန်းနိုင်ငံ က ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း Yulia Tymoshenko ရဲ့သမီးဖြစ်သူ Eugenia Tymoshenko ၊ ရုရှားနိုင်ငံမှာ ထောင်ကျခံနေရတဲ့စီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဟောင်း လည်းဖြစ် ၊ ရုရှားသမ္မတ ပူတင်ရဲ့အတိုက်အခံလည်း ဖြစ်တဲ့Mikhail Khodorkovsky ရဲ့ သားဖြစ်သူ Pavel Khodorkovsky တို့ လည်းပါဝင်ပါတယ်။
Pavel Khodorkovsky က သူ့ ဖခင် က ရေးပေးတဲ့ စာတစောင် ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံ အခြေစိုက် PEN International အဖွဲ့ရဲ့ ဖိတ်ကြား ချက်အရ
ဗြိတိန် နိုင်ငံကို ခေတ္တရောက် ရှိနေတဲ့ လူရွှင်တော် ဒါရိုက်တာ ကိုဇာဂနာက လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် အကြောင်းကို ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာ လန်ဒန်မြို့ရှိ ကမ္ဘာကျော် သိမ်းမြစ်ကမ်းက Queen Elizabeth Hall ခန်းမမှာ ပြုလုပ်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ပြောကြားသွားပါတယ်။
အဲဒီ ဆွေးနွေးပွဲမှာ သူ တင်ပြပြောဆိုခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုဇာဂနာက အခုလို ရှင်းပြပါတယ်။
"ကျနော့်အနေနဲ့လည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ Pen လို အဖွဲ့အစည်းမျိုး ရှိစေချင် တယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း ကျနော် သူတို့ကို ထုတ်ဖော်ပြီးမေတ္တာ ရပ်ခံတယ်ပေါ့။ ကျနော် freedom of expression ကို လူပျက်လုပ်လာတဲ့ တလျှောက်လုံးမှာ ဒါကိုပဲ တောက်လျှောက်လုပ်လာတယ်။ ဒီအခွင့်အရေး တရပ်ကိုပဲ ဆိုက်လိုက်မတ်တပ် တောင်းဆိုလာတယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း ကျနော် ဘဝကို ရင်းခဲ့တယ် ဆိုတော့ အခုချိန်ထိပဲ အဲဒီ freedom of expression ဆိုတာကိုပဲ ဦးတည်နေတယ်ဆိုတာကို ကျနော် သူ့တို့ရှေ့မှာ ပြောပြခဲ့တယ်ခင်ဗျ။"
သူ့ဟောပြောချက်တွေထဲက သူပထမဦးဆုံး ကဗျာစတင်ရေးဖွဲ့တုန်းက အကြောင်းတွေ ပြောပြတဲ့အခါမှာ လာရောက်နားထောင်တဲ့ ပရ်ိသတ်တွေထဲက မျက်ရည်ကျတဲ့ သူတောင်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။
"ကျနော် ကဗျာစရေးဖြစ်တဲ့ အချက်ကလေးကို သူတို့ကြိုက်သွားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲဒီချိန်တုန်းက ၁၉၈၈ ထောက်လှမ်းရေးတပ် (၆) ဝန်းထဲမှာ ကျနော် တော်တော်နှိပ်စက်ခံထားရလို့ လဲနေတဲ့အချိန်ပေါ့။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော့်ရှေ့မှာ သံတံခါးတခုရှိတယ် ။ အဲဒီရှေ့မှာ သစ်သားတံခါးကြီးတခု ရှိတယ်။ အဲဒါကြီးကို ကျနော်မြင်နေရတယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီတံခါးကြီးက အမြဲပိတ်ထားတယ်။ ဒါပေမယ့် ထမင်းကျွေးမယ် ရေလာပေးမယ်ဆိုတဲ့ အချိန်ကျ အဲဒီတံခါးက ပွင့်တယ်ဗျ။ ဆိုတော့ ကျနော် စိတ်ကူးတခု
ရတယ်။ တံခါးက အမြဲမပိတ်ပါလား။ ဒီတခါးက တချိန်ကျရင် ပွင့်တယ် အဲဒီင်္တော့ တနေ့ကျရင် ငါလွတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးလေးရတယ်။ အဲဒီတုန်းက ကျူဖျာကြမ်းကြမ်းကြီးတွေ အပေါ်မှာ အိပ်ရတယ်။ အဲဒီကဗျာလေးက ကျနော့်ဘဝရဲ့ ပထမဦးဆုံး ကဗျာဘဲ ။ ကျနော့်ဘဝရဲ့ ပထမဦးဆုံးကဗျာကလည်း အဲဒီလို အကျဉ်းထဲ အကျပ်ထဲ တော်တော် စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ ဘဝရောက်နေတုန်းမှာ ရလိုက်တော့ အဲဒီကဗျာ ရပုံရနည်းနဲ့ အဲဒီကဗျာ ရေးပုံရေးနည်းကို ပြောပြလိုက်တော့ တယောက်ဆို ငိုတယ်ဗျ။"
နိုင်ငံတကာPEN အဖွဲ့ကနေ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း PEN အဖွဲ့ ဖို့နဲ့ ကမ္ဘာ့ အနုပညာရှင်တွေနဲ့ မြန်မာ့ အနုပညာရှင်တွေ ဖလှယ်နိုင်အောင် သူတို့ ကူညီမယ့်အကြောင်း ကမ်းလှမ်းတဲ့အတွက် အဲဒီကိစ္စကို ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
" Pen ကတော့ အမေရိကားရောက်နေကတည်းက တောက်လျှောက် ကမ်းလှမ်းတယ်ခင်ဗျ။ ဗမာပြည်မှာလုပ်ပါ ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီဥစ္စာက ပိုက်ဆံကုန်တာမဟုတ်ဘူးဗျ။ ကျနော်တို့လူစုယုံပဲ ဆိုတော့ ကျနော်တို့ အချင်းချင်းကြားထဲမှာ မျှဝေပီးတော့ သဘောတူတဲ့လူတွေစုလိုက်တာ စုလိုက်တော့ အဖွဲ့လေးတခုဖြစ်သွားမယ်။ ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ သူတို့ အနေနဲ့ကလည်း အနုပညာအရ ဆိုတော့ ဒီက စာရေးဆရာတွေ ကျနော်တို့ ဆီလာမယ်။ ကျနော်တို့ဆီက စာရေးဆရာတွေ လည်း သူတို့ ဆီပို့မယ် ဆိုတော့ မြန်မာ့အနုပညာလည်း ကမ္ဘာကသိမယ်။ ကမ္ဘာ့အနုပညာ လည်း မြန်မာက ရမယ်ဆိုတော့ အနုပညာချင်း ဖလှယ်ကြတဲ့သဘော သို့သော် ဘယ်လို အနုပညာလည်းဆိုတော့ လွတ်လပ်စွာရေးသားဖော်ပြ။ လွတ်လပ်စွာ ဖော်ထုတ်တင်ပြတဲ့ ဟာကို ပြည်သူတွေလည်း ချပြလို့ရမှာပေါ့။"
အခု ကျင်းပတဲ့ လွတ်လပ်စွာရေးသားဖော်ပြခွင့် ဆွေးနွေးပွဲ ကို နိုင်ငံတော်တော် များများက ကဗျာဆရာတွေ စာရေးဆရာတွေ သတင်းစာဆရာတွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား စာပေ ဝါသနာရှင်တွေ အပါအဝင် လူ ၅၀ ကျော် တက်ရောက်တာကို တွေ့ရပါတယ်။
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်အား ပဲရစ္စ် မြို့တော် ခန်းမအတွင်း ကျင်းပသော အခမ်းအနား အပြီး အမည် မဖော်ပြသော ပုဂ္ဂိုလ်တဦးမှ လက်ဆောင် ပေးအပ်နေစဉ်။ (ဂျွန်လ ၂၇ ရက်၊ ၂၀၁၂။)
မြန်မာနိုင်ငံကို ကူညီကြမယ့် အကူအညီတွေ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဟာ ပြုပြင်ပြောင်း လဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်ကြပါလို့ မြန်မာ့ဒီမို ကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောလိုက်ပါတယ်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံကို ရောက်နေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မနေ့ညနေပိုင်းက ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံပြီး ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရုံးထဲမှာ အမှတ်တရ လွတ်မြောက်ရေး သစ်ပင် စိုက်ပျိုးခဲ့ပါတယ်။ မနေ့ညနေပိုင်း ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံပြီး သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်တဲ့ အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ ကိုသားညွန့်ဦးက တင်ဆက်ပေးမှာပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ ဒုတိယနေ့အဖြစ်နဲ့ မနေ့ညနေ ပိုင်းကတော့ ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး Laurent Fabius နဲ့ တွေ့ဆုံပါတယ်။ ပြင်သစ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက နိုင်ငံအကြီးအကဲတွေကို ကြို သလို ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေးရုံးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်း တခမ်းတနား ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်ကလည်း နိုင်ငံခြားရေးရုံးထဲမှာ အမှတ်တရ လွတ်မြောက်ရေးသစ်ပင် စိုက်ပျိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ မှာ ပြင်သစ်နိုင်ငံက နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ အကျော်အမော်အချို့လည်း တက်ရောက်ပါ တယ်။ ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦး တွေ့ဆုံအပြီးမှာတော့ နိုင်ငံခြားရေးရုံးအပြင်မှာ သတင်းထောက်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံကြ ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားအကူအညီတွေဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို အထောက်အကူပြုဖို့ ဖြစ်သင့်တယ် လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုသွားပါတယ်။
“ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် လူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပေးမယ့်အကူအညီတွေ ဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့၊ ဒီလုပ်ငန်းတွေနဲ့ ကိုက်ညီဖို့ သေသေ ချာချာ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။ လွတ်မြောက်မှု၊ တန်းတူညီမျှမှုနဲ့ စုစည်းညီညွတ်မှု ဆိုတာတွေ ကို ပြင်သစ် လူမျိုးတွေနဲ့ ပြင်သစ်အစိုးရကို ပြောနေစရာတောင် လိုမယ် မထင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျမတို့ အတွက်တော့ တကယ့်ကို ဇွဲနပဲနဲ့ အရှည်သဖြင့် လုပ်ဆောင်လို့ ရလာမယ့် ဆုလာဘ်မျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။“
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အထိ အတော်လေး သတိထားရဦးမယ့် အခြေအနေဖြစ်တယ် လို့ နိုင်ငံတကာကို သတိပေး ပြောဆိုသွားပါတယ်။
“၂၀၁၅ နောက်တကြိမ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွေဖြစ်လာတဲ့အခါနဲ့ အဲဒီမတိုင်ခင်အတွင်း နောက်ထပ် သုံးနှစ်ကာလအတွင်းမှာ အတော်လေး သတိထားကြရဦးမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံဟာ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီနည်း ကျတဲ့၊ လွတ်လပ်ပြီး မျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေရှိတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ချင်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ရဲ့ ကံကြမ္မာကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ပုံသွင်း ဖန်တီးယူနိုင်တဲ့ အနေအထားရောက်ပြီလို့ မြန်မာပြည်သူတွေ ပြောနိုင် တဲ့ နှစ်တနှစ်ဖြစ်လာဖို့လိုပါတယ်။”
ညပိုင်းမှာတော့ ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ညစာတည်းခင်းဧည့်ခံပါတယ်။ ဒီမတိုင်ခင် မနက်ပိုင်းကတော့ ပါရီမြို့တော်ဝင်အပ်နှင်းတဲ့ ပါရီမြို့ရဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင်မြို့တော်သူဆု ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်လက်ခံယူခဲ့ပါတယ်။
ဒီကနေ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံခရီး တတိယနေ့မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ပြင်သစ်ရဲ့ နာမည်ကျော် ဆော်ဘွမ်းတက္ကသိုလ်မှာ လူငယ်ကျောင်းသားတွေနဲ့ အမေးအဖြေ တွေ့ဆုံ စကားပြောဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
နှစ်ပေါင်း ၂၄ နှစ်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ဥရောပခရီးစဉ်အဖြစ် ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့မှာ စတင်ခဲ့ တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ပြင်သစ်နိုင်ငံ မတိုင်မီမှာတော့ ဆွစ်ဇာလန်၊ နော်ဝေ၊ အိုင်ယာလန်နဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံတွေကို သွားရောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၁ ခုနှစ် ကတည်းက ပေးအပ်ထားတဲ့ နိုဘဲလ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆု အပါအ၀င် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုတွေကို လက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရအကြီးအကဲတွေ လွှတ်တော် တာဝန်ရှိ သူတွေနဲ့လည်း ခရီးစဉ်တလျှောက် တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ခရီးစဉ်အစအဖြစ် အင်္ဂါနေ့က ရောက် လာချိန်မှာတော့ နိုင်ငံအကြီးအကဲတွေကို လက်ခံ ကြိုဆိုလေ့ရှိသလို Elysee နန်းတော်မှာ သမ္မတ Francois Hollande က ညစာနဲ့ ဧည့်ခံကြိုဆိုခဲ့သလို ဗြိတိန်နိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်းမှာလည်း ဗြိတိသျှလွှတ်တော်မှာ သမိုင်းဝင်မိန့်ခွန်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
By ကိုသားညွန့်ဦး (VOA)
မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းမှာ ပြုပြင်ပြောင်း လဲမှုတွေ ပေါ်လာပြီ ဆိုပေမယ့် စိုးရိမ်ရဆဲ အခြေအနေနဲ့ လူ့အခွင့် အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ရှိနေဆဲ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီးအဖြစ် အဆိုပြု ခံထားရတဲ့ အမေရိကန် မူဝါဒညှိနှိုင်းရေးမှူး Derek Mitchell က သူ့ကို သံအမတ်ကြီးအဖြစ် အဆိုပြုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အထက်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကောက်မတီ ရှေ့မှောက်ကြားနာပွဲမှာ မနေ့က ပြော ဆိုပါတယ်။ အမေရိကန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုရင် အမေရိကန်ပြည်ထောင် စုရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိန်းသိမ်းတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဖြစ်ဖို့ သူ့အနေနဲ့ အားပေးလုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ ပြောပါ တယ်။ အပြည့်အစုံကို ကိုသိန်းထိုက်ဦးက ဆက်ပြီး တင်ပြပါလိမ့်မယ်။
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအကြား ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေဟာ အကျိုးဖြစ်ထွန်းပြီး ဒီ ထက်ပို ရှေ့ဆက် လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုတဲ့အကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီးအဖြစ် အဆိုပြုခံထားရတဲ့ မစ္စတာ Derek Mitchell က အထက်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြား ဆက်ဆံရေးကော်မတီရှေ့မှောက် ကြားနာပွဲမှာ ပြောဆိုသွားပါတယ်။
“ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ပိုင်းတွေအတွင်း မြန်မာအစိုးရဘက်က ပြောင်းလဲလာတဲ့ ခြေလှမ်းတွေ တော်တော်များများကို တွေ့နေရပါတယ်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုဘက်ကလည်း လှုပ်ရှားမှုတခုချင်းဆီပေါ် တုံ့ပြန်သွားမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်း ဆက်ပြီး ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်။ ကျနော်တို့ဘက်က ဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် အကျိုးဖြစ်စေရေးနဲ့ စနစ်အတွင်းက ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို လိုလားသူတွေ၊ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုတွေကို အားကောင်းလာအောင် ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါ။ ဒီ ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးကို ဆက်လက်ပြီး တိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်သင့် ပါတယ်။
“ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်း အထူးခြားဆုံး ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတခုကို ပြောရရင် သဘာပတိကြီးပြောတဲ့ အတိုင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တို့ အကြား လက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့ ပြင်ဆင်လာနိုင် တာကို ပြရပါလိမ့်မယ်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာ ထူးခြားတဲ့ ဦးစီး ဦးဆောင် တယောက် ဆိုတာကို သက်သေပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ထူးခြာပြောင်မြောက်တဲ့ အမြော်အမြင်နဲ့ ဦးဆောင်မှုကို ကျနော်တို့ ဘယ်လိုမှ အသိအမှတ်ပြုဖို့ မပျက်ကွက်သင့်ပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ သူနဲ့ သူ့ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေရဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ သန်းနဲ့ချီတဲ့ မြန်မာပြည် သူတွေ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပေးဆပ် အနစ်နာခံမျှော်မှန်းခဲ့တဲ့ မျှော်မှန်းချက်တွကို ထင်ဟပ်နေပါတယ်။”
ဒါပေမယ့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေဟာ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန် ပြော သလို နောက်ကြေင်း ပြန်လှည့်မသွားနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုး မဟုတ်တဲ့အတွက် ရှေ့မှာ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေ ရှိမယ်ဆိုတာကို သတိရဖို့လည်း မစ္စတာ Derek Mitchell က ပြောဆိုသွားပါတယ်။ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ရှိနေဆဲဖြစ်သလို လွတ်မြောက်လာသူတွေအပေါ်မှာလည်း ကန့်သတ်ချက်တွေ ရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့ အကြောင်း၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပါ စစ်တပ်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍနဲ့ လူမျိုးစုဒေသ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ စိုးရိမ်စရာတွေရှိတဲ့ အကြောင်း ပြောဆိုသွားတာပါ။ သူသံအမတ်ကြီးအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခွင့်ရတဲ့အခါ မြန်မာနဲ့ မြောက် ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးအခြေနေအပေါ် စိုးရိမ်မှုတွေကို အလေးပေးပြောဆိုမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“မကြာသေးခင်က ရခိုင်ဒေသအတွင်း အုပ်စုဂိုဏ်းဂဏတွေအကြား အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ တာကိုကြည့်ရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရေရှည်တည်တန့်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ ရာစုနှစ် မဟုတ်ရင် ဆယ်စုနှစ်ချီ အမြစ်တွယ်ခဲ့တဲ့ ကွဲလွဲချက်တွေကို ပြေလည်အောင် ဖြေ ရှင်းဖို့ လိုနေတယ်ဆိုတာကို ပြသနေပါတယ်။
“မြန်မာနဲ့ မြောက်ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံအကြား စစ်ရေး ဆက်ဆံမှုတွေ ထင်သာမြင်သာမရှိတဲ့အပေါ် စိုးရိမ်တယ် ဆိုတာကို ကျနော်တို့ ဘက်က လူသိရှင်ကြားရော၊ သီးခြားတွေ့ဆုံပွဲတွေမှာပါ အမြဲတစေ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ တိတိကျကျအနေနဲ့ မြန်မာအစိုးရဘက်က ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေး ကောင်စီရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ လက်နက် မပြန့်ပွားရေး နိုင်ငံတကာ သဘောတူညီချက်တွေကို လိုက်နာဖို့ ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် အတည်ပြုချက်ရပြီးရင် မြန်မာအစိုးရနဲ့ ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေမှာ ဒီကိစ္စကို အဓိက ဦးစားပေးအဖြစ် ကျနော် ဆွေးနွေးပြောဆိုမှာပါ။ မြန်မာနဲ့ မြောက်ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံ လျို့ဝှက်ဆက်ဆံမှုတွေ ရှိတယ်ဆိုပြီး ကျနော်တို့ဘက်က မကြေမနတ်ဖြစ်နေသမျှ၊ ဒီဆက်ဆံမှုကို ချက်ချင်း အပြီးသတ် အဆုံးမသတ်မချင်း မြန်မာနဲ့ အမေရိကန် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးဟာ အပြည့်အ၀ ပုံမှန်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျနော် ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ပြောဆိုမှာပါ။”
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း အပါဝင် စစ်မှန်တဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ဖို့ သံန္နိဋ္ဌာန် ခိုင်မာတဲ့သူတွေ အများအပြားရှိနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေဟာ အခွင့်အလမ်းတွေ မြင်တွေ့ နေရပြီဆိုပြီး Mr. Derek Mitchell က ပြောသွားပါတယ်။
“သမ္မတအနေနဲ့ရော သူနဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် ၀န်ကြီးဌာနအရာရှိတွေက အပြောင်းအလဲတွေအတွက် တကယ်ပဲ သံန္နိဋ္ဌာန်ခိုင်မာတဲ့ သူတွေပါ။ သူတို့မှာ ရှေ့ကို တိုးတက်တဲ့ အစီအစဉ်တွေ ချထားပါတယ်။ ဒီ ခေါင်းဆောင်တွေ ဘယ်လောက်ကြာကြာ ဆက်ပြီး ဦးဆောင်နိုင်မလဲ၊ မျှော်မှန်းချက်တွေကပဲ သိပ်ကို မြင့်နေသလား၊ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါ့မလားဆိုတာ ကျနော်တို့ အတိအကျ မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော်အပါအ၀င် အမေရိကန် အစိုးရအရာရှိတွေဘက်ကတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အခြေအနေဟာ အခွင့်အလမ်းတွေ ရလာနေပြီ၊ တံခါးတွေ ပွင့်လာနေတဲ့ အနေအထားလို့ မြင်ပါတယ်။”
အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကော်မတီရှေ့မှောက် ကြားနာပွဲမှာ ဗာဂျီးနီးယား ပြည် နယ်၊ အထက်လွှတ်တော်အမတ် Jim Webb က သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။ သူက အမေရိကန် စီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွေ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး ကိစ္စတွေကို အဓိက ဆွေးနွေးပြောဆိုသွားခဲ့ပါယ်။
“ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ် ဟာ စိန်ခေါ်အကဲစမ်းမှုတွေ အများအပြား ရှိနေဆဲပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း အပြု သဘောဆောင်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ အတွက် အပြန်အလှန် တုံ့ပြန်အချက်ပြဖို့ တောင်းဆိုမှုတွေ ရှိနေတာပါ။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ နိုင်ငံရေး လွတ်လပ်ခွင့်တွေနဲ့ လူတဦးချင်းစီရဲ့ အခွင့်အရေးဆိုတာတွေကို ဘေးဖယ် မထားသင့်ပါဘူး။ ဒီလို အချက်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် ဘယ်နိုင်ငံတွေနဲ့ ပဲ ထိတွေ့ဆက်ဆံပါစေ၊ ကျနော်တို့အနေနဲ့ အဓိကဦးစားပေးအဖြစ် ထားသင့်ပါတယ်။ ရရှိလာတဲ့ နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲတွေ ရေရှည် တည်တံ့ဖို့အတွက် ဆိုရင် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးလာအောင် ကျနော်တို့ဘက်က တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။”
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေသူတွေကို ပံ့ပိုးပေးတာ၊ မြန်မာပြည်သူတွေကို ကူညီပေးတာတွေနဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို စနစ်တကျ ဒီမိုကရေစီအခြေခံပေါ်မှာ ခိုင်မာအောင် ထေက်ပံ့ပေးတာတွေ လုပ်ကိုင်ဖို့ လိုမယ်လို့ မစ္စတာ ဒဲရစ်မစ်ချဲက ပြောဆိုသွားပါတယ်။
By ကိုသိန်းထိုက်ဦး (VOA)